Ezaka fa tsy vintana • AoRaha
Ezaka fa tsy vintana
Mety mbola ny fandresena tokoa aloha no manan-danja, amin’izao fotoana izao, ho an’ny ekipam-pirenena malagasin’ny taranja baolina kitra na ny Barea. Vesaran’ny fanerena tsy maintsy mitondra vokatra tsara eo imason’ny mpankafy baolina kitra malagasy izy ireo, taorian’ny fahombiazan’i Madagasikara nandritra ny fiadiana ny amboaran’i Afrika (CAN), tany Ejipta, farany teo.
Eny an-jorony ny fomba filalao, mahafinaritra na maha te ho tia (arakaraka ny fitakian’ny mpijery).
Zary ekipam-pirenena atahorana aty Afrika moa isika. Maiva-mavesatra io fijery vaovao ananan’ny Kaontinanta amin’ny Barea io. Maivana satria mametraka antsika amin’ny toerana tsy lavitra an’ireo fifaninanan-dehibe maneran-tany, toy ny CAN sy ny Mondial (Fiadiana ny amboara eran-tany), mba tsy voatery hiainga any amin’ireo dingan’ny savaranonando lava izao. Mavesatra kosa
rehefa tsy manambany antsika intsony ireo mpifanandrina. Manosika an’ireo mpikatroka rehetra ao anatin’ny tontolon’ny baolina kitra mankany amin’ny fanovàna sy fanatsarana ny fomba fiasa ireo tsapa rehetra ireo.
Tapitra hatreo ny kinanga, ny fianteherana amin’ny vintana, ny fitavozavozana ary ny fanantenana fahagagana. Samy nahita ny lesoka teo amin’ny fahaiza-miarak’ireo mpilalao malagasy niatrika ny Etiopiana farany teo isika. Niaraha-nanaiky ny voka-dratsin’ny tsy fisian’ny fampivondronana nandritra an’ireny fiatoana iraisam-pirenena ka tokony ho nanatanterahana lalao ara-pirahalahiana ho an’ny Barea ireny. Toy izany koa ny lafiny fandaminana ankapobeny, raha tsy hiresaka afa-tsy ny fanomanana ny dia mankany ivelany.
Mba aoka izay ity mampitaraina delegasiona malagasy isaky ny mandranto fifaninanana ivelan’ny Nosy ity. Mety ho vaika hampanao ny ainy tsy ho zavatra eo amin’ireo mpilalao ny fiezahana handresy an’i Nizera anio hariva, na dia teo aza ny harerahana noho ny fahateren’ny elanelan’andro nilalaovana amin’izao fifanintsanana amin’ny CAN 2021. Mbola afaka manarina isika. Mbola afaka mianatra tsikelikely ny fanaon’ny firenen-dehiben’ny baolina kitra maneran-tany. Mila ezaka ny fifaninanana avo lenta raha te
hitoetra amin’izao haavon’ny toerana misy an’i Madagasikara izao.